INokia X7: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
INokia X7 (7.1 Plus) sele ihanjisiwe ngokusemthethweni
UEder Ferreño | | Iiselfowuni
Izolo ibilawulwa luluhlu oluphezulu lweHuawei. Nangona yayingezizo zodwa iifowuni ezazisetyenziswayo, kuba iNokia yayinomcimbi ocwangcisiweyo. Kwimeko yakhe, inkampani ivelise iNokia X7, enokwaziwa njengeNokia 7.1 Plus kwintengiso yamanye amazwe. Kubekho ukuvuza malunga nesi sixhobo kwiiveki ezidlulileyo, kwaye senziwe sasisemthethweni.
INokia X7 iye yaziswa eTshayina, intengiso yokuqala eya kufumana le fowuni, kwaye igama layo liya kuba yi-X7. Yonke into ibonisa, ukuba sixhomekeke kumatyala angaphambili, ukuba ngaphandle kwelizwe laseAsia kuyakubizwa ngokuba yi-7.1 Plus. Sele siyazi yonke into malunga nesi sixhobo sitsha kwi-brand. Yintoni esinokuyilindela kuyo?
Sijongene nesixhobo esifikelela kwinqanaba eliphakathi kuluhlu lophawu. Le yinto esinokuyibona kwinkcazo yayo, ngakumbi kukhetho lweprosesa ngokuqina. Ayidanisi, kwaye inyani kukuba sinethemba lokuba ifowuni izakuqalisa kungekudala kwilizwe liphela.
1 Ukucaciswa kweNokia X7
2 Ixabiso kunye nokufumaneka
Ukucaciswa kweNokia X7
I-premium mid-range ikhula ngokukhawuleza kwimarike. Icandelo elinemodeli engaphezulu nangaphezulu onokukhetha kuyo, kwaye phi sihlala sidibana ne-Snapdragon 710 njengeprosesa, njengakule meko. Oku kukucaciswa kweNokia X7:
IsikriniI-6,18 intshi iPureDisplay enesisombululo esipheleleyo se-HD + kunye ne-18,7: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 710
Ukugcina ngaphakathiI-64/128 GB
Cámara traseraI-12 + 13 MP ngokuvula f / 1.8, ukukhanya kwe-LED kunye nokuzinzisa kokubonakalayo
Ikhamera yangaphambili: 20 MP ngokuvula f / 2.0
Ibhetri: I-3.500 mAh
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo
abanyeIsivamvo esingasemva somnwe, i-3.5 mm yejack yeaudio
U bunzima: Iigram ezili-178
Ayilulo lonke ulwazi malunga nale fowuni olutyhiliweyo ngalo mzuzu. Kodwa enkosi kwezi zinto zibalulekileyo Sele sinombono ocacileyo wokuba le Nokia N7 izakusizisela ntoni Ekufikeni emarikeni. Ifowuni efikelela kwicandelo elikhuphisanayo ngokuthe kratya, kwaye ivelise ukucaciswa okuhle, kunye neprosesa ethembisa ukunika intsebenzo elungileyo. Ukongeza, inebhetri enkulu, eya kuthi isinike ukuzimela.
Ngokuphathelele kuyilo, AbakwaNokia bayaqhubeka nokubheja kwinotshi kwiifowuni zayo. Iimodeli zamva nje eziboniswe yinkampani zinezi mpawu, ezifumaneka kwakhona kule Nokia X7. Inotshi yobungakanani obukhulu, ngokungathandabuzekiyo elawula umphambili wale fowuni. Kule notch ikhamera yangaphambili yefowuni ibekwe.
Njengesiqhelo kolu luhlu, sifumana ikhamera ngasemva kabini. Yintoni egqithisile, sinobukrelekrele bokuzenzela kuzo, eziya kusivumela iindlela ezongezelelweyo zokufota, ezinje ngefuthe elithandwayo le-bokeh. Singathatha iifoto kuzo zonke iintlobo zeemeko sibulele ngesixhobo, nokuba kukwiimeko ezinokukhanya okuncinci okanye okungalunganga.
INokia X7 iza kuphehlelelwa e China kungekudala, mhlawumbi kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Okwangoku asazi nto malunga nokwaziswa kwefowuni kumazwe aphesheya. Ukuba sithathela ingqalelo iimodeli zangaphambili zenkampani, ezinje ngeX6, siyazi ukuba izakuqaliswa phantsi kwelinye igama ngaphandle kwe China. Kule meko iya kuba njengeNokia 7.1 Plus, kodwa okwangoku akukho mihla malunga noku. Kuya kufuneka silinde i-HMD Global uqobo ukuba ithethe ngakumbi ngayo.
Sifumana iinguqulelo ezininzi zale Nokia X7 ekhoyo, esekwe kwi-RAM yakho kunye nendibaniselwano yokugcina yangaphakathi. Zonke ziyathengiswa eTshayina, kwaye sele sinamaxabiso azo. Sikwabonisa amaxabiso otshintshiselwano nganye nganye, njengesikhokelo:
4GB ye-RAM kunye ne-64GB Yokugcinwa kwangaphakathi: i-1.699 yuan (malunga ne-215 euro ukuyitshintsha)
I-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB ukugcinwa kwangaphakathi: 1.999 yuan (malunga nama-250 euros ukutshintsha)
I-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi: 2.499 yuan (315 euro ukutshintsha)
Ngokuqinisekileyo eyakho amaxabiso azakuphakama ngandlela ithile ekusungulweni kwayo eYurophu, kodwa ayijongeka imbi ngale ndlela. Azibizi kakhulu, ngokuqinisekileyo abathengi abanokuzithanda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia X7 (7.1 Plus) sele ihanjisiwe ngokusemthethweni
Ezona Fowuni zinamandla zi-10 zikaSeptemba 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
Gcina i-Huawei Mate 20 nge-Orenji kwaye ufumane iHuawei yeWatch GT simahla